Yemagariro Midhiya Kuenzana uye Kudzoka pane Investment Martech Zone
China, June 2, 2011 China, Gumiguru 27, 2011 Douglas Karr
Gary Vaynerchuck iri kukurumidza kuve imwe vhidhiyo yekuparidza evhangeri yandinogara ndichimira kuteerera, kutevedzera, uye kubvumirana nazvo. Bryan Elliott munguva pfupi yapfuura akabvunzurudza Gary muzvikamu zviviri zvakateedzana izvo zvandaizokurudzira bhizinesi-muridzi wese ... kubva kudiki kuenda kune CEO… kuteerera.
Imwe poindi mubvunzurudzo yakandirova - uye handina chokwadi chekuti pakanga paine kusimbiswa kwakaringana pazviri mubvunzurudzo. Gary akataura nezve makambani anoisa kuenzana mumasocial media. Vatengesi nemakambani anowanzo tsvaga rova ​​nekukurumidza, mushandirapamwe une kudzoka kukuru pakushambadzira mari. Ini ndinotenda mabhizinesi zvechokwadi anofanirwa kufunga nezvenhau rezvenhau zvakasiyana.
Ndakagara ndichitaura kuti blogging ndeye marathon, kwete Sprint. Ndine vatengi izvozvi vakashushikana nekuti, mushure memwedzi yakati wandei, ivo havasi kuona kudzoka kukuru uko vamwe vari muindasitiri vari kuzivisa. Vari kuona kukura uye kukurumidza, hazvo… uye ndizvo zvatinoisa pfungwa dzavo pairi.
Zvakafanana nekuisa mari muaccount yako yekurega basa uye kutarisira kuzorora pamakore mashoma. Zvingaitika here? Ini ndinofunga iwe unogona kurova stock inoputika .. asi mikanai? Chokwadi ndechekuti yega tweet, yega yega blog post, yega Facebook mhinduro ... uye zvinotevera zvinotevera zvaunogamuchira… idiki diki yekudyara mune ramangwana rebhizinesi rako. Regedza kutsvaga kwekukurumidza kugadzirisa.
Kungofanana neakaundi yako yekurega basa, tarisa mafambiro uye ingo ita chokwadi chekuti iri kuenda munzira kwayo. Uri kukura unotevera here? Uri kusvika vanhu vazhinji here? Uri kuwana zvakawanda kutaurwa, kuda uye kudzokorora? Aya ese nickels, mapeni uye madhimoni anoiswa muakaundi yako yemagariro equity account.
Ini pachangu ndakatanga nevezvenhau makore gumi apfuura uye ndanga ndichiisa mari vhiki rega, kana zvisiri zvezuva nezuva. Vamwe vanhu vanoshamiswa nekukurumidza kwebhizinesi rangu, DK New Media, wakura. Isu takave nehofisi yedu yakavhurwa kweinopfuura gore uye tave izere-kwenguva kwe ~ gumi nemwedzi. Tine vashandi vatatu venguva yakazara uye vanopfuura gumi nevaviri venguva yakazara shamwari makambani atiri kushanda zuva nezuva. Tine vatengi kubva kuNew Zealand, kwese kuEurope uye kuNorth America kwese.
Ini handina kuvaka iyi kambani mugore kana makore maviri. Ini ndakavaka kambani mumakore gumi apfuura, uye ndikavaka hunyanzvi mune mamwe gumi zvisati zvaitika. Makumi maviri emakore ekudyara mandiri uye nenharaunda yangu yepamhepo pamberi Ini ndakambovhura mikova yebhizinesi rangu! Zvinoda kukurumidza, moyo murefu, kuzvininipisa… uye kusamira-kumanikidza kuti ubudirire.
Kana kambani yako ikatanga kuisa mari nekukurumidza, pane kumberi, mikana yekuti kambani yako ive yakasimba uye kuve nenharaunda yakatendeka yevatengi uye mafeni yakakura. Kutanga kuisa kuenzana mumasocial media nhasi uye hauzorasikirwa Sekutaura kwaGary, shanduko yega yega munhau dzazvino - kubva mumapepanhau, kumagazini, kuenda kuredhiyo neterevhizheni, vakaviga makambani aisakwanisa kuchinja. Kana kambani yako ikafunga kusaisa mari, zvakanaka. Vanokwikwidza vako vachadaro.
Njodzi iri kunonoka. Kuedza kurega pamakore makumi matanhatu nemashanu paunotanga kuchengetedza pamakumi matanhatu hakushandi. Kana zvekudyara pasocial media. Makambani anofanirwa kushandura zvakanyanyisa nzira yavanotarisa pasocial media, tsvagurudzo (yakakanganiswa nehukama) uye kushambadzira kwepamhepo kana vakagara kuti vararame mangwana. Iyi haisi fashoni.
Jun 8, 2011 pa11: 22AM
Iyi ndiyo nzira yandave ndichinzwa kwemavhiki mashoma apfuura. Zvinonyevenutsa kuona maonero ako pane izvi uye nekuziva kuti zvemagariro enhau zvinoedza zvinotora nguva kunyangwe mune 'ita ZVINO' mhando yemhepo!
Ini chaizvo ndakango blogga nezvezvangu zvinonetsa ndisati ndaverenga izvi! Ndakaiverenga zvakare mushure mekuverenga tsamba yako uye ndikaona kuti ndanga ndanyora - "Ini ndinofunga chikamu CHINONYANYA kwazvo chekutungamira nhepfenyuro yenhabvu chiri kuda mhedzisiro munyika yekukurumidza mhinduro!" (http://bit.ly/l5Enda).
Kutenda nekutumira Douglas! ZVINONYANYA kukosheswa!
Aug 1, 2012 na7: 58 PM
Ndizvozvo! Mamwe mabhizinesi akaona masocial media zvakasiyana. Ehe, zvinotora kuyedza kwakawanda uye nguva yekukohwa zvawakadyara.